किन भगवान पुकार्छन नेमार ? - सबै खेल
अन्तर्राष्ट्रिय फिचर फुटबल
किन भगवान पुकार्छन नेमार ?
२६ फाल्गुन २०७६, सोमबार २०:५८ March 9, 20200Comments Brazil, neymar, psg
सन् २०१८ को रसिया विश्वकपमा सर्वाधिक आलोचित हुने खेलाडी थिए नेयमार। कारण थियो, उनको घमण्ड र नाटक। विश्वकप सकिएको लामै सयम उनको खिल्ली उडाइयो।
उनको क्लब पेरिस सेन्ट जर्मेनका खेलमा उनले दर्शकलाई मुक्का नै हान्न भ्याए। त्यती मात्रै होइन्, गत सिजन च्याम्पियन्स लिगको अन्तिम १६ को दोस्रो लेगमा पिएसजी हारेपछि उनले रेफ्रिलाई अपशब्द प्रयोग गर्दै सामाजिक सञ्जालबाटै गाली गरे। नेयमारको घमण्डका उदाहरण धेरै छन्। जसका कारण उनी आलोचनाका केन्द्रमा रहने गर्छन्।
जादुमयी खेल, घमण्डी स्वभाव, नाटक आदीका कारण उनी अन्तर्राष्ट्रिय फुटबलमा जहिल्यै चर्चामा आइरहन्छन्। मैदानमा रहँदा होस् या मैदानबाहिर उनी चर्चामै हुन्छन्।
तर, अहिले भने उनी फेरिएको आभाष गर्न थालिएको छ। लामो समय चोटसँग भिडेका उनी पछिल्लो समय मैदानमा उत्कृष्ट देखिन थालेका छन्। यो उनी फेरिनुको कारण भने होइन। कारण त उनले प्रत्येक खेल अघि सामाजिक सञ्जालमा गर्ने पोस्ट हो। सायद उनलाई चोटसँगको लडाइँले निकै गाह्रो महसुस भएको हुनपर्छ। आफ्नै क्लबका समर्थकले गरेको व्यवहारले उनी दिक्क भएको हुनुपर्छ।
र, त ‘घमण्डी’को उपमा पाएका नेयमार आजभोलि भगवानको नाम जप्न थालेका छन्। सायद घाइते हुन नपरोस् भनेर उनले भगवानसँग प्राथना गर्ने गरेका छन् । त्यसैले उनले खेलअघि लेख्ने गरेका छन्, ‘भगवान हाम्रो रक्षा गर।’
गत नोभेम्बरमा ह्यामिस्ट्रिङ इन्जुरीबाट फर्किएपछि नेयमारले प्रत्येक खेलअघि आफ्नो फेसबुक पेजमा एउटा पोस्ट गर्ने गरेका छन्। उनले आफ्नो एउटा फोटो राख्छन्, र क्याप्सन लेखेका हुन्छन्, ‘भगवान हामीलाई आर्शिवाद दिनुस् र हाम्रो रक्षा गर्नुस्।’
नेयमारले प्रत्येक खेलअघि किन यस्तो खेल्छन्? आम फुटबल प्रेमीको मनमा यो प्रश्न आरहरहेको हुन्छ, त्यो स्वभाविक पनि हो। नेयमारमा आफ्नो फुटबल करिअरको ‘पिक आवर’मा छन्। र, उनी मैदानमा शतप्रतिशत योगदान दिन चाहान्छन्। त्यसैले उनले आफ्नो व्यवहार फेरेका छन्।
नेयमार उत्कृष्ट फुटबल हुन्, त्यसमा दुईमत छैन। सँगसँगै के पनि हो भने उनी चोटले सताइएका र सर्वाधिक ट्याकलमा पर्ने फुटबलर हुन्। सन् २०१३ मा सन्तोसबाट बार्सिलोना आएयता २७ वर्षीय नेयमार २१ पटक घाइते भएका छन्।
यो सात वर्षमा नेयमार पाँच सय दिन अर्थात् करिब डेढ वर्ष चोटका कारण मैदानबाहिर बस्ने बाध्य भएका छन्। यसले पनि उनीमाथि बढी ट्याकल हुने पुष्टि गर्छ।
त्यसैले नेयमार अब आफूलाई पूर्ण फिट राख्दै धेरैभन्दा धेरै सयम मैदानमा बिताउन चाहान्छन्, त्यसैले उनले पछिल्लो सयम प्रत्येक खेलअघि सामाजिक सञ्जालमा त्यस्तो पोस्ट गरेरको सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ।
यस्तो पोस्ट नेयमारले पहिलो पटक सन् २०१९ को सेप्टेम्बर २५ मा गरेका थिए। त्यो पोस्ट स्टेड रेइम्सविरुद्धको खेलअघि थियो। त्यतिखेर नेयमार कुर्कुचाको चोटका कारण ९० दिनपछि मैदानबाहिर रहँदै भर्खरै मैदान फर्किएका थिए।
त्यसको एक महिनपछि नै नेयमार पुनः घाइते भए। अक्टोबर १३ मा नाइजेरियाविरुद्धको मैत्रीपूर्ण खेलको सुरुआतमै ह्यामिस्ट्रङ समस्या देखियो र उनी मैदान छाड्न बाध्य भए। त्यो चोटले नेयमारलाई एक महिना मैदानबाहिर राख्यो।
च्याम्पियन्स लिग समूह चरणअन्तर्गत नोभेम्बर २७ मा रियल मड्रिडविरुद्धको खेलमार्फत नेयमार पुनः मैदान फर्किए। सो खेलअघि नेयमारले फेरि पोस्ट गरे, ‘भगवान हामीलाई आर्शिवाद दिनुस् र हाम्रो रक्षा गर्नुस्।’ त्यसयता नेयमारले हरेक खेलअघि यस्तै पोस्ट गरिरहेका छन्।
चोटसँग नेयमारको संघर्ष
ब्राजिलमा आयोजना भएको सन् २०१४ को विश्वकप क्वाटरफाइनलमा कोलम्बियाका डिफेन्डर जुआन कामिलो जुनिगाको ट्याकलमा नेयमार गम्भीर घाइते भए। त्यसको एक महिनापछि नेमार मैदान त फर्किए, तर उनको शरीर भने पहिलोको जस्तो रहेन। त्यसपछि नै नेयमार घाइते हुने क्रमम सुरू भयो।
अझ सन् २०१७ मा बार्सिलोनाबाट पिएसजी आएपछि नेयमार घाइते हुने क्रम बढ्यो। पछिल्ला दुई वर्ष उनले सबैभन्दा बढी मैदानबाहिर बिताए। यो दुई वर्षयमा करिब एक वर्ष त नेयमार मैदान बाहिर रहे। यसबीचमा उनी १० पटक घाइते भए। पिएसजीमा दुई सिजनमा नेयमारले ५८ खेल गुमाएका छन्।
बार्सिलोना मै रहँदा पनि नेयमार घाइते नभएको भने होइनन्। बार्सिलोनामा सन् २०१३ देखि २०१७ सम्म खेलेका उनी त्यसबीच १० पटक घाइते भए र २९ खेल गुमाए।
नेयमारमाथि एउटा आरोप पनि लाग्ने गरेको छ। उनी जनवरी महिनामा बढी घाइते हुन्छन्। फेब्राेवरीमा उनी आफैकाे र मार्चमा उनकी बहिनीकाे ‘बर्थडे’ पर्ने भएकाले उनी त्यसवेला घाइते भएको नाटक गर्ने आरोप पनि नेयमारमाथि लाग्ने गरेको छ। जनवरीमा मात्रै नेयमार ६ पटक घाइते भएका छन्।
← ऐतिहासिक उपाधिबाट लिरपुल २ जित टाढा
कोरोनाका कारण इटालीमा खेलकुद गतिविधि बन्द →
एएफसी यू–१६ च्याम्पियनसिप छनोट : नेपाल कठीन समूहमा
२६ बैशाख २०७६, बिहीबार १८:०४ 0
बंगबन्धु गोल्डकपका कारण स्थगित ए डिभिजन लिग बुधबारबाट सुरु हुने
२१ आश्विन २०७५, आईतवार २०:१२ 0
बंगबन्धु गोल्डकप : नेपाल ताजकिस्तानसँग भिड्दै
१५ आश्विन २०७५, सोमबार १९:३० 0